कोरोनाको भयावह अवस्थाबाट जोगिन घरमै बसौं - Ujyaalo Nepal
कोरोनाभाइरस महामारीको आर्थिक असरसँग जुझ्न भारतमा २२ अर्ब डलरको आर्थिक प्याकेज घोषणा
अमेरिकामा हालसम्मकै धेरै मानिसद्वारा बेरोजगारी सुविधा माग
कोरोनाको भयावह अवस्थाबाट जोगिन घरमै बसौं
By ujyaalo	 On Mar 27, 2020 3
केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस धेरै नै भाइरल बनेको छ । ‘तपाई घरमा बस्ने की, आइसोलेसनमा बस्ने की, फोटो फ्रेममा बस्ने, रोज्ने जिम्मा तपाईको । यो स्टाटस जसले लेखेको भएपनि अहिलेको विश्वका लागि वास्तविक मात्र नभएर कोरोना जस्तो महामारीबाट बच्ने अचुक औषधि पनि हो । विश्व कोरोनाको चपेटामा छ । माहामारी फैलिएको छ । नयाँ नयाँ देशहरु यसको चपेटामा पर्दैछन् । दिनप्रतिदिन संक्रमित हरुको संख्या बढिरहेको छ र मृत्युदर पनि बढी रहेको छ । विश्वका सबै सरकारले आफ्नो क्षमता र दक्षता अनुसारको प्रयास जारी राखेका छन् । मानवीय हेलचेक्र्याईं र लापर्वाहीले महामारीले तिब्र गति लिइरहेको छ ।
पछिल्लो समय इटली विश्वमा सबैभन्दा बढी कोरोना प्रभावित बनेको छ । अमेरिकामा तिव्र गतिमा फैलिएको कोरोना नियन्त्रणका लागि अमेरिकी सरकारले आफ्नो सबै शक्ति केन्द्रीत गरेको छ । कोरोनाको अबको बाटो दक्षिण एसिया भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिले नै प्रक्षेपण गरिसकेको छ । एक वा दुई देश मात्र नभएर कोरोनाको महामारीबाट बाहिर निस्कन विश्वलाई ठूलै सकस परिरहेको छ ।
भारतले २१ दिनका लागि पुरै देश लकडाउन गरेको छ । नेपालमा एक साताका लागि भएको लकडाउन अपेक्षाकृत सफल छ तर यतिले मात्र पुग्दैन । अब नागरिक सचेत हुने बेला आएको छ । पहिलो संक्रमित फेला पररे पनि निको भइसकेका छन् भने दोस्रो संक्रमित फेला परेको तेस्रो दिन अर्को संक्रमित फेला परेका छन् । भारतसँगको सिमाना बन्द भइसकेको अवस्थामा थोरै मात्र बुद्धिमानी गर्ने हो भने हामी अझै पनि सुरक्षित रहन सक्छौ । सरकारले कतार एयरमा आएका १ सय ५८ जनाको पहिचान गरि उनिहरु र उनिहरुको सम्पर्कमा रहेका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सके र नागरिक सचेत भए कोरोना विरुद्धको लडाईमा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछौ ।
सरकारले विदेशबाट आउनेमा कडाई गरिदिएको भए अहिले सम्म हामी कोरोना मुक्त नै हुने थियौं । तर अब सरकारलाई गाली गरेर पनि हुनेवाला केही छैन । यो कठिन अवस्थामा आफैं सचेत हुनुको विकल्प छैन । अहिलेसम्म समय छ । आत्मसंयमित बनौं । लकडाउन तपाई हाम्रै लागि हो । यो सरकारका लागि होइन । केही समय घरभित्रै बस्दा कसैलाई कुनै हानी नोक्सानी हुदैन । तर हामीले अहिलेको समयलाई बुद्धिमानी पूर्वक प्रयोग गर्न सकेनौं भने भोली को अवस्था नियन्त्रण बाहिर नजाला भन्न सकिन्न ।
तपाईले विगतमा गर्न नभ्याएका र घर बसेर गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन् । परिवारका लागि राम्रो समय नदिनु भएको धेरै भइ सकेको छ । घरमा सँगै बसेर नखाएको, नानी बाबुलाई समय नदिएको, उनिहरुसँग रमाउन नपाएको धेरै समय भइसकेको छ । अहिलेको समयको सदुपयोग गर्नुहोस । तपाईले घरमा बसेर किताव नपढ्नु भएको थुप्रै भइसकेको छ । तपाई लेखपढमा रमाउनु हुन्छ भने तपाईले पढ्नु पर्ने थुप्रै किताबहरु छन् । तपार्ई लेखन कलालाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईले प्रयोग गर्न जान्नु भयो भने यो समय तपाई जिवनकालको उत्कृष्ठ समय हुनेछ । कस्तो बनाउने तपाईको हातमा छ ।
तपाईलाई ध्यान कस्तो लाग्छ? यो लकडाउनको समय तपाईले ध्यान योग र साधनामा लगाउनु भयो भने तपाईको जीवनमा यो अमुल्य र अकल्पनीय समय हुनेछ । तपाईलाई योग ध्यान र साधनामा मन छ तर आयडिया छैन भने तपाईले चाहेको योग साधना र ध्यानका विधिहरु खोज्नका लागि तपाईलाई गुगलले सहयोग गर्नेछ । लाइभ भिडियोमा थुप्रै ध्यान सिकाउने गुरुहरु तयार हुनुहुन्छ । ध्यानले तपाईलाई नसोचेको परिणाम दिनेछ । यसको उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
लेख्नुस्, केही लेख्नुस् । तपाईको जीवनमा भएका विर्सिन नसकिने क्षणहरु, तपाईले गरेका राम्रा कामहरु, तपाईले गर्न नसकेका कामहरु, तपाईको जिवनमा आएका उतारचढावहरु लेख्नुस् । सक्नुहुन्छ पुस्तकको रुपमा लेख्नुस । सक्नुहुन्न भने लेखको रुपमा लेख्नुस् । यो काम तपाईका लागि निश्चय नै ऐतिहासिक हुनेछ ।
घरमा बसेर आफुलाई मन लाग्ने काम गर्नुस । त्यहाँ तपाईको सिर्जना हुन्छ । केही सिर्जनसिल काम गर्नुस । जुन कामले तपाईलाई जीवनमा सन्तुष्टी प्रदान गर्न सकोस । किनकी कतिपय कामहरु हामी आफ्नो रहर र चाहना नहुँदा नहुँदै बाच्नका लागि बाध्यताले गरिरहेका हुन्छौ र रहरका कामलाई पन्छाई रहेका हुन्छौ । यो समय तपाईलाई रहर लागेको तर गर्न नपाएको र गर्न नभ्याएको काम गर्ने समय हो । यसको सदुपयोग गर्नुस । यो सबै तपाई र तपाईको परिवारकै लागि हो ।
अहिलेको यो विश्वको संकटपूर्ण अवस्था तपाई र हाम्रा लागि मात्र होइन । कोरोनाको महामारीबाट विश्व त्रसित छ । दिन प्रतिदिन विश्व कहालीलाग्दो दलदलमा फस्दै जाँदैछ । यसको मुख्य कारण मान्छेले अनुसासन पालना नगर्नु नै हो । महामारीको बारेमा जानेर वा नजानेर घरबाट बाहिर निस्कनु नै हो । चीनपछि आज इटलीको अवस्था हेर्नुहोस । स्पेनको अवस्था हेर्नुहोस । अमेरिकाको अवस्था हेर्नुहोस । लकडाउनको अवस्था नमान्दा ती देशका नागरिकले भोग्नु परेको अकल्पनीय पीडालाई हेर्नुहोस र केही समय घरमा विताउनु होस ।
यदी तपाईले लकडाउनको पालना गर्नु भएन र बाहिर निस्कनु भयो भने निश्चय नै इटली स्पेन र अमेरिकाले व्यहोर्दै आएको विनास हामीले पनि व्यहोर्नका लागि तयार रहनु पर्नेछ ।
कोरोनाको लक्षणमात्र देखिए पनि अहिलेको अवस्थमा बाध्य भएर घरको क्वारेन्टाइनमा होइन अस्पताल र विभिन्न ठाउँमा बनाइएका अस्थायी क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्नेछ । त्यहाँ विरामीले कोही आफन्त र साथी भाईलाई भेट्न पाउने छैन । अझ शरिरमा कोरोना भएको पुष्टी भयो भने त आइसोलेसनमा नै बस्नु पर्नेछ । त्यहाँ चिकित्सकको निगरानी त रहने छ । तर अहिलेको हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था तिर पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको कमजोर तयारी र फितलो उपचार पद्धतीले पनि कोरोनाबाट बच्न आफै तयार हुनुपर्छ । आइसोलेसनमा राखिएका विरामीलाई कोही आफन्तले या साथीभाईले भेट्न पाउने छैनन् ।
यति मात्र होइन कोरोनाबाट मृत्यु हुनेलाई पनि परिवारका सदस्यले अन्तिम संस्कारका लागि भेट्न र छुन पाउने छैनन । सरकारले त्यस्ता मृतकको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ । अहिले हामी कहाँ कोरोना बारे थाहा नपाएर लकडाउनलाई कफ्र्यु लगाए जस्तो मानिएको छ । बेलुका ५ बजेपछि सडकमा मान्छेहरु यत्रतत्र भौतारि रहेको देखिन्छ । प्रशासनले लकडाउन बुझेको अवस्था देखिँदैन । सडकमा प्रहरीको व्यवहारबाट नै त्यो थाहा हुन्छ । अनि सर्वसाधारणलाई पनि लकडाउन बारे जानकारी छैन । बुझाउन नसक्नु सरकारी कमजोरी हो ।
फितलो राज्य संयन्त्रको परिणाम हो । यदी हामीले अहिलेको लकडाउन मानेनौं भने भोलीका दिनमा त्यो अवस्था नआउला भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनकी कोरोनाबाट बच्न घरमा बस्ने बाहेक अर्को भरपर्दो विकल्प हुनै सक्दैन । विकसित राष्ट्रले गरेको प्रयास हामी गर्नै सक्दैनौ । किनकी उपचार पद्धतीदेखि हरेक तयारीका लागि हामी उनीहरुले गरे जति गर्न सक्दैनौं । त्यसैले आफु बच्नु र परिवारलाई बचाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । अफवाहको पछि नलागौं । आत्मबल उच्च बनाएर सचेत बनौं ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या, त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना
के पिपीई सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक छ ?
काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक खाद्यवस्तु बिक्रेताले भ्यानमार्फत बिक्री वितरणको…